Adeegyada Luuqadda Maraykanka - Bogga Guriga
Xaruntayada shirkadda ee Los Angeles,
la aasaasay 1985, oo ku taal caasimadda madadaalada ee adduunka.
Waxaan la shaqaynaa shirkadaha aduunka ugu sarreeya "XAWAARAHA GANACSIGA"
Xafiiskayaga Manhattan guriga u ah ganacsiga adduunka,
Xarumaha Dhaqaalaha iyo Dhaqanka.
Xafiiskayaga Las Vegas, Xarunta Ciyaaraha & Shirarka Mareykanka,
halkaas oo dunidu u timaado inay ku kulmaan kuna ciyaaraan.
Waxaan ku hanweynahay in aan joogno Caasimadda Qarankeena
taageeridda Dawladda Maraykanka, Millateriga, Aan macaash doonka ahayn & dunida shirkadaha.
Xafiiskayaga ku yaal aagga Baay, oo ka mid ah kuwa ugu weyn iyo
inta badan magaalooyinka caalamka
Ameerika iyo guriga Silicon Valley.
Xafiiskayaga deegaanka ee Miami, oo ah magaalo dhaqan ahaan kala duwan
iyo Dalxiiska & Xarun Ganacsi.
Xafiiskayaga Chicago oo ku yaal xeebta harada Michigan,
u adeegaya Magaalada Dabaysha in ka badan 3 sano.
Wadnaha Texas, xafiiskayaga deegaanka ee Houston,
magaalada 4-aad ee ugu weyn qaranka.
Wac: 800.951.5020, Email- translation@alsglobal.net
Jawaab bilaash ah
Xigasho qoraal ah
Xigasho Adeegga Warbaahinta
Adeegyada Turjubaanka Dhammaan Luuqadaha iyo Qaababka
Adeegyada Turjubaanka Isku mar iyo isku xigta
Adeegyada warbaahinta Codadka, Duubista & Qoraal-hoosaadka
Adeegyada Qoraalka Waxaa lagu keenaa dhammaan qaababka
Baro sida AML-Global ay kuu caawin karto
KU SAABSAN AML-Global
AML-Global waxa ay ku xidhidhisay khubarada afafka shirkado fadhigoodu yahay Maraykanka iyo kuwa caalamiga ah in ka badan 35 sano. Hadafkayagu waa inaanu bixino madal heer caalami ah oo lagu xidho macaamiisha kuwa ugu wanaagsan, luuqadaha ugu aqoonta badan ee laga heli karo aduunka.
Waxaan nahay shirkad ku mashquulsan bixinta khibrad macaamiil oo heer sare ah.
Tayadu waa udub dhexaadka wax kasta oo aan samayno.
Waxaan nahay ISO 9001 & 13485 shahaado
Dhammaan wareejinta faylalkayadu waa ammaan waana la siray
Waxaan ku jirnaa safka hore ee Tignoolajiyada
Xogtayada xirfadlayaasha adeegga luqadda waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn warshadaha
Liiska Qaybaha Luuqadaha aanu ku hadalno oon qorno
Waxaan horeyba u galnay bishii afraad ee sanadka, oo ay April nagu soo wajahan tahay. Bishan ayaa la og yahay inay tahay bisha gu' ee waqooyiga…
March, oo loogu magac daray ilaahii Roomaanka ee dagaalka Mars, waa bisha saddexaad ee sanadka. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer may ahayn sidaas. Horaantii…
Febraayo waxay noqon kartaa bisha ugu gaaban sanadka; si kastaba ha ahaatee, kama yara muhiimsan kuwa kale. Iyadoo Janaayo uu muujinayo isbeddelka…
Janaayo waxay calaamad u tahay bilowga sanadka cusub. Sannad Cusub oo Farxad leh Dhammaan! Sannadka Cusub waxa uu ka dhigan yahay bog kale oo bannaan, fursad kale oo lagu bilaabo. Run…
Sannad kale oo tagay Dabcan, Disembar had iyo jeer waa bisha ugu dambeysa ee xiritaanka sanadka, si kastaba ha ahaatee labadii sano ee la soo dhaafay ayaa la raacay…
Waraaqihii Cadaanka ahaa ee ugu dambeeyay
Foomka ku buuxi dhinaca midig si aan uga caawino ganacsigaaga inuu daboolo baahidiisa luqadeed. Caadi ahaan waxaad jawaab ku heli doontaa daqiiqado, ma aha maalmo
Si degdeg ah loogu jawaabo
Malaayiin Kalmadood Ayaa La Turjumaa Sanad Kasta
Saacadaha la fasiro sanad walba
# ee culummada aqoonta leh
Waqooyiga Ameerika Ku Qiimaynta Xajmiga
WAXAAN AQBALNAA DHAMAAN KAARAHA DAYNTA EE WAAWEYN
Qoraallada Warshadaha Muhiimka ah
Turjumaada Warshadaha Muhiimka ah
TARJUMADDA TALEEFANKA (OPI)
Fasiraadda Fog ee Fiidiyowga (VRI) - Ku xidhka Virtual
Farsamada Adeegga Warbaahinta
TARJUMAAN- MAGAALOOYIN KASTA OO INAGA JOOGA
Turjubaanada Las Vegas
Turjubaanada Los Angeles
Turjubaanada New York
San Diego Turjubaano
San Jose Turjubaano
Turjubaanada San Francisco
Turjubaanada Washington DC
ADEEGYADA tarjumaada -200+ LUQADA
ADEEGGA tarjumaadda ee LOS ANGELES
San Diego Turjumaanada
Turjumaanada San Francisco
Turjumaanada Washington DC
Adeegyada Qoraalka ee Chicago
Dallas Adeegyada Qoraalka
Adeegyada Qoraalka ee Houston
Adeegyada Qoraalka Irvine
Adeegyada Qoraalka ee Las Vegas
Adeegyada Qoraalka ee Los Angeles
Adeegyada Qoraalka ee Orlando
Adeegyada Qoraalka ee San Diego
Adeegyada Qoraalka ee San Francisco
Adeegyada Qoraalka ee Washington DC
Turjubaanada Luqadda Farta Maraykanka
Turjumaanada Luqadda Calaamadaha Ameerika
Turjumaada Luqadda Cantonese, Turjumaada, Adeegyada Qoraalka
Turjumaada Luuqadda Dari, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luuqada Farsi, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luuqadda Kanada ee Faransiiska, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luuqada Faransiiska, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjubaano Jarmal ah
Turjumaada Luuqadda Cibraaniga, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luqadda Talyaaniga, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luuqadda Jabbaan, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luqadda Kuuriya, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Mandarin, Turjumaada Luqadda Shiinaha, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luqadda Boortaqiiska, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luqadda Ruushka, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luuqada Tagalog, Turjubaanka, Adeegyada Qoraalka
Turjumaada Luqadda Turkiga, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
Turjumaada Luqadda Fiyatnaamiis, Turjumaada, Adeegga Qoraalka
MUUQAAL MACAAN MUUQAAL YAR
Right Xuquuqda daabacaadda 2022. Dhammaan xuquuq dhowran. Waxaa Maamulaya Yael Consulting